Acer ConceptD: Noocyada cusub ee buugaagta lagu qoro xirfadleyda | Wararka Gadget
ConceptD: Noocyada kala duwan ee buugaagta xirfadeed ee Acer
Eder Esteban | | Kumbuyuutarro, Laptops
Waxaan ku sii wadeynaa warka ka soo baxa Acer soo bandhigidiisa IFA 2019. Shirkadda ayaa naga tagta noocyadeeda cusub ee buugaagta lagu qoro xirfadleyda, kaas oo ah nooca ConceptD. Qeybtan cusub waxaa loo bilaabay gaar ahaan abuurayaasha maaddooyinka, maaddaama dhammaan qalabka la siiyay moodelladan. Moodello awood leh, oo ay ka buuxaan astaamo kaa caawinaya inaad shaqadaada si wanaagsan u qabato.
Baaxadani waxaa loogu talagalay inay bixiso waxqabadka ugu badan, marka lagu daro ogolaanshaha saacado badan oo adeegsi aan kala go 'lahayn. Shaki la'aan, waxaa loo soo bandhigayaa sida ugu fiican ee xirfadlayaasha. Acer wuxuu nooga tagayaa dhowr laptops iyo kormeere ku dhex jira aagaggan 'ConceptD'.
Shirkadu way ogtahay muhiimada ay leedahay in sifiican looga soo baxo howlaha sida xaqiiqada dalwaddii, caqliga macmalka ah iyo gorfaynta weyn data. Sababtaas awgeed, dhammaan noocyada kala duwan waxaa loo soo bandhigaa inay yihiin mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee arimahan, oo leh qaabab taxane ah oo isdaba-joog ah, oo leh 'ConceptD 9 Pro' xagga hore oo ah laptop-keeda calanka ah.
Acer Swift 7, laptop qafiif ah oo qafiif ah oo qiimo aan qiimo lahayn [Dib u eegis]
1 Fikradda D 9 Pro: Xiddiga xiddigta
2 Fikradda D 7 Pro: Awoodda qaab fudud
3 Fikradda D 5 Pro: Laba cabbir ayaa la heli karaa
4 Fikradda D 3 Pro: Waa ku habboon tahay abuurayaasha maaddooyinka
5 Fikradda D 5 iyo Fikradda D 3: Qaababka Cusboonaysiinta
7 Qiimaha iyo bilowga
FikraddaD 9 Pro: Xiddiga xiddigga
Qaabka xiddigta ee noocyadan ka socda Acer waa ConceptD 9 Pro. Waxaan nafteena ku helnaa laptop cusub oo ku habboon naqshadeeyayaasha, iyada oo ay ugu wacan tahay joogitaanka Ezel Aero fiiqan oo lagu farsameeyay CNC, oo loogu talagalay astaanta lafteeda. Waa inaan ku darno inay la socoto a 17,3-inji shaashaddiisu tahay xallinta 4K (3840 x 2160), kaas oo awoodi doona inuu rogrogo, kordhiyo oo jiifsado mar walba. Intaa waxaa sii dheer, bandhigani waa PANTONE la ansaxiyay oo daboolaya 100% ee Adobe RGB gamut gamut leh Delta E <1 midab sax ah oo aan horay loo arag.
Laptop-kaan 'ConceptD 9 Pro' wuxuu leeyahay processor Intel Core i9 illaa 9aad iyo naqshadeynta illaa NVIDIA Quadro RTX 5000. Waa garaaf loogu talagalay barashada qoto dheer ee AI ama jilitaanka injineernimada iyo istuudiyo waaweyn oo animation ah. Kufiican kuwa adeegsadayaasha ubaahan awooda iyo iskutallaabta iskutallaabta. Buug-yaraha wuxuu la socdaa Wacom EMR stylus oo si fudud magnetik ahaan ugu dhegan.
Fikradda D 7 Pro: Awoodda qaab fudud
Qaabka labaad ee noocan ah ee ka socda Acer waa ConceptD 7 Pro. Waa laptop loo soo bandhigo inuu yahay qaab xoog badan, jilicsan, laakiin aad u fudud isla waqtigaas. Marka way kufiican tahay markay tahay inaad nala qaadato markasta. Dherarkiisu waa 17,9mm miisaankiisuna waa 2.1kg.
Laptop-kan ayaa leh shaashad dhan 15,6-inch, 4.000-pixel shaashad ah. Waxaa loogu talagalay waxqabadka socodka on-go iyo sidoo kale waa qayb ka mid ah barnaamijka 'Studio' RTX Studio. Waxaa ku shaqeeya jiilka 7-aad ee processor-ka Intel Core i9 wuxuuna la socdaa NVIDIA Quadro RTX 5000 GPU Intaa waxaa dheer, ConceptD Palette waxay bixisaa istcimaalo adeegsade dareen leh oo si dhakhso leh u hagaajiya astaamaha midabka doorbidaya isla markaana kormeera kontaroolada nidaamka.
Fikradda D 5 Pro: Laba cabbir ayaa la heli karaa
Laptop-kan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka 'Studio' RTX Studio, sida ay Acer lafteeda ku xaqiijisay soo bandhigisteeda. Waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar ku habboon marka la sameynayo naqshadeynta CAD adag, animation iyo hawlaha shaqada jilitaanka. Taasi waa sababta ay tusaale wanaagsan ugu tahay naqshadayaasha, 3D animators, soosaarayaasha saamaynta gaarka ah ama istudiyaha naqshadeynta.
ConceptD 5 Pro waxaa lagu bilaabay laba cabbir, sida muuqaalada 15,6 ama 17,3-inch IPSi bandhigyo, labaduba waxay leeyihiin xalka 4K UHD. Waxay sidoo kale adeegsaneysaa jiilka 7-aad ee Intel Core i9 processor-ka iyo Quadro RTX 3000. Waxaa loogu talagalay qalab bir sare leh, oo bixiya cimri dherer. Bandhigeeda shahaadeysan ee PANTONE-ansaxsan wuxuu u heellan yahay farshaxan-yahannada, oo muujinaya midab ballaadhan oo ballaadhan oo u dhigma 100% meel bannaan oo midabkeedu yahay Adobe's RGB si loogu beddelo midab sax ah.
Fikradda D 3 Pro: Waa ku habboon tahay abuurayaasha maaddooyinka
Laptop-kan waa suurtogal inay tahay tan ugu fudud ee laga heli karo inta u dhexeysa, sida Acer ku sheegay soo bandhigideeda. Waa nooc ku habboon sawir qaadayaasha, ardayda naqshadeynta warshadaha, naqshadeeyayaasha garaafyada ama naqshadayaasha gudaha. Sidoo kale qulquliyeyaasha dhufto ee sida YouTube ama Twitch waxay u noqon kartaa tusaale wanaagsan dareenkan. Marka la soo koobo, ku habboon abuurayaasha maaddooyinka.
Marka laga hadlayo qeexitaankiisa, waxa astaantu shaaca ka qaaday ayaa ah inay adeegsato processor-ka Intel Core i7 illaa jiilka 9aad iyo sawirada NVIDIA Quadro T1000. Waxay ka taagan tahay wax walba ka sarreeya maxaa yeelay waxay u shaqeysaa aamusnaan in ka yar 40 dB. Loogu talagalay sahlanaanta isticmaalka socodka, isticmaalayaasha waxay ka soo gali karaan akhristaha faraha isku dhafan iyada oo loo marayo Windows Hello si loogu helo marin fudud oo xasilan markasta ama meel kasta.
Fikradda D 5 iyo Fikradda D 3: Qaababka Cusboonaysiinta
Acer wuxuu dib u cusbooneysiiyaa laba laptop oo ka mid ah inta u dhexeysa, Kuwaas oo hela taxane naqshadeynta iyo hagaajinta qeexitaanka ah. Astaantu waxay noo reebaysaa laba laptops oo cusub ConceptD 5 iyo ConceptD 3. Laba ikhtiyaar oo loogu talagalay kuwa raadinaya ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo ka badan inta u dhexeysa, laakiin aan tayo lahayn.
Fikradda D 5 waxaa lagu bilaabay laba cabbir, 15 inch ama 17 inch oo shaashad ah. Labada laptop waxay isticmaalaan illaa 7-ka Intel processor-ka Intel i9. Inkasta oo ConceptD 5 lagu cusbooneysiiyay xulashooyinka NVIDIA GeForce GTX 2060 GPU Dhinaca kale, ConceptD 3 waa buug yar oo xariif ah oo xariif ah uguna mahadcelintiisa dhammaystirka cad, iyo sidoo kale ku shaqaynta bilaa buuq si dadka isticmaala ay xoogga saaraan naqshadahooda. Xaalkiisa, wuxuu adeegsadaa NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU, oo bixisa awood weyn.
Ugu dambeyntiina, shirkaddu waxay nooga tagaysaa kormeere inta u dhexeysa. Kani waa ConceptD CM2241W cusub, taas oo ah kormeeraha kumbuyuutarka casriga ah ee ku habboon isticmaalayaasha doonaya inay ku daraan bandhig dibedda ah goobtooda shaqada. Marka waxaan helnay shaashad ballaaran, taas oo sahleysa shaqadeena.
Kormeerahan wuxuu leeyahay jajab jilicsan, kaas oo kuu oggolaanaya inaad si cad uga faa'iideysato wejiga hore marwalba. Intaa waxaa dheer, waxay u taagan tahay midabkeeda saxda ah ee ugu fiican taas waxay taageertaa 99% ee Adobe gambo midabka gamut. Marka waxay ku habboon tahay naqshadeeyayaasha iyo abuurayaasha maaddooyinka.
Xaddigaani waa midka ugu ballaaran ee Acer uu ku soo bandhigay IFA 2019. Waxaan helnaa moodallo badan, qaarkoodna xitaa leh noocyo badan oo cabbir ahaan ah. Dhamaantood waxaa la bilaabi doonaa bilahaan ugu dambeeya sanadka, inta udhaxeysa Oktoobar iyo Disembar. In kasta oo helitaanku kala duwanaan doono iyadoo ku xiran moodalka. Kuwani waa taariikhaha sii deynta iyo qiimaha:
ConceptD 9 Pro waxaa la heli doonaa laga bilaabo Nofeembar qiime dhan 5.499 euro.
ConceptD 7 Pro waxaa la bilaabay laga bilaabo Nofeembar iyada oo lagu qiimeeyo 2.599 euro.
ConceptD 3 waxaa la heli doonaa laga bilaabo Oktoobar qiimo dhan 1.199 euro.
Acer ConceptD 3 Pro ayaa la heli doonaa laga bilaabo Nofeembar qiimo dhan 1.499 euro.
Fikradda D 5 (17,3 ″) ayaa la heli doonaa laga bilaabo Nofeembar iyadoo lagu qiimeeyo 2.199 euro.
ConceptD 5 Pro (17,3 ″) waxaa la heli doonaa laga bilaabo Diseembar qiimaha 2.599 euro.
Acer ConceptD 5 (15,6 ″) ayaa la heli doonaa laga bilaabo Sebtembar qiimo ah 1.999 euro.
Fikradda D 5 Pro (15,6 ″) ayaa laga heli doonaa Oktoobar qiimaha 2.499 euro.
Kormeeraha 'ConceptD CM2241W' waxaa la heli doonaa bisha Oktoobar iyadoo lagu qiimeeyo 469 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Laptops » ConceptD: Noocyada kala duwan ee buugaagta xirfadeed ee Acer
Honor 20s iyo Honor Play 3: Nooca cusub ee bartamaha
Acer wuxuu cusbooneysiiyaa noocyadeeda kala duwan ee buugaagta xusuus-qorka 'ultrathin Swift'